Wednesday March 25, 2020 - 11:03:42 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wasaaradda caafimaadka dowladda Shiinaha ayaa xaqiijisay in cudur cusub oo halis ah uu markale ka dillaacay wadankeeda balse uu ka khatar yaryahay Carona Virus marka loo eego dhimashada uu geystay iyo qaabka uu ku faafayo.
Maalintii Talaadada ugu yaraan hal qof ayaa udhintay cudur cusub oo lagu magacaabo Hanta Virus halka uu soo ritay dad gaaraya 32 qof sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka wadanka Shiinaha.
Cudurkan oo laga qaado hilibka Jiirka ama dolliga ayaa qofkii ugu horreeyay ku dilay magaalada Yunan ee galbeedka dalka Shiinaha, dhaqaatiirta ayaa sheegaya in cudurkan ay la ildaranyihiin 32 qof oo Virus-ka isqaadsiiyeen xilli ay gaari bas ah kuwada safrayeen.
Durbadiiba malaayiin qof Shiinays ah ayaa bilaabay in ay joojiyaan cunista hilibka doolliga oo ah isha kaliya ee uu ka yimid Hanta Virus, inta badan dadka Shiinayska ah ayaa cuna hilibka xayawaanaadka sunta ah sida abeesooyinka,Jiirka, Kabaliiga iyo Daanyeerrada.
Wargeyska News Week ayaa daabacay warbixin uu uga digayo in Virus-ka Hanta uu noqdo mid caalami ahaan ugu faafo adduunka, bishii December sanaddii 2019 ayay aheyd markii Carona Virus uu ka dilaacay Shiinaha kadibna uu adduunka intiisa kale kusii faafay.